မနက်စောစောတစ်ကြောင်းတည်းသာရွတ်ဆို ရပြီး ငွေဒလဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီး
[Zawgyi] မနက်စောစောတစ်ကြောင်းတည်းသာရွတ်ဆို ရပြီး ငွေဒလဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီး ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်တွေ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။လူတိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးပေးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရွတ်ဆိုပုံတွေကတော့မနက် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကိုကိုင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အာရုံပြုပြီး ၁။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ကို ၃ခေါက် ရွတ်ဆိုပါ။ …
ရန်ကုန် က လူတွေ YBS မစီးဘဲ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး တက္ကစီ စီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
[Zawgyi] ရန်ကုန် က လူတွေ YBS မစီးဘဲ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီး တက္ကစီ စီးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ပြည် သူ့ သွားလာရေး လမ်းကြောင်းတွေ (public Transports) တွေမှာ ရည်ရွယ်ချက် ၄ရပ် ရှိတတ်တယ်။(၁) လုံခြုံဖို့၊ (၂) တွက်ချေကိုက်ဖို့၊ (၃) သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် မထိခိုက်ဖို့၊ (၄) (ကျန်တဲ့ အရေးတွေနဲ့) သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့(၁) လုံခြုံဖို့ ဆိုရာမှာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေaccidents လျော့ချဖို့နဲ့၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ ပါဝင်ပါတယ်။ (၂) တွက်ချေကိုက်ဖို့ ဆိုတာမှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာတွေ သက်သာဖို့၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင် service provider ရော၊ စီးနင်းသူ …
[Zawgyi] ကြည့်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲခဲ့ရတဲ့ စေတနာ့ရှင်မလေးရဲ့ မရှိဆင်းရဲသားများအပေါ် လှူတဲ့ အလှူ ကြည့်​ရင်းနဲ့မျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်။သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ။နောက်လည်းများများလှူနိုင်ပါစေ။အော် လှူ တဲ့လူရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေခံစားမိနေလည်းတောမသိဘူး ၊ရယူတဲ့ သူတွေ ရဲ့မျက်နှာပေါ်က အပြုံး တွေ ကို ကျနော် ကြည်လိုက် မြင်လိုက်ရတော့ ပီတိတွေဖြင့်ခါ။အလှူပေးသူ ရယူသူ ကြည်ဖြူစိတ်ဝမ်း အေးချမ်းကာရယ် အပြုံကိုယ်စီ ရကြလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့ ။ အဲ့ဒီအပြုံး မျက်နှာကိုကြည်ကာ အလှူရှင်ခမျာ ဘယ်၍ ဘယ်မျ ဝမ်မြောက်ဝမ်းသာ ဖြင့်နေပါလေ့။အခုပြုသော အမည်မသိ ရုပ်လည်းမမြင် ဘယ်သူပင်ဖြင်ပါစေ အခုပြုသော မိတ်ဆွေ ၏ အလှူကောင်းမူ့ ကုသိုလ် အတွက် ကျနော် တို့ သာဓု သာဓု …
ကျပ် ၁၃၇.၄၃၅ သန်းတန် သံစုံတီး ဝိုင်းဝယ်ယူ ရန်စီစဉ်နေသည့် ရန်ကုန်စည်ပင်
#Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ကျပ် ၁၃၇.၄၃၅ သန်းတန် သံစုံတီး ဝိုင်းဝယ်ယူ ရန်းစီစဉ်နေသည့် ရန်ကုန်စည်ပင် ရန် ကုန် အစိုးရလက်အောက်ခံ ရန်ကုန်စည်ပင်က သံစုံတီးဝိုင်းဝယ်ရန် ကျပ် ၁၃၇.၄၃၅ သန်းတောင်းခံ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြန်ကြားရေးဌာနက သံစုံတီးဝိုင်းဝယ်ရန်အတွက် ကျပ် သိန်း ၁၃၇၀ ကျော်(၁၃၇.၄၃၅သန်း) တောင်းခံထားကြောင်းယနေ့ဇွန် ၄ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှ သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းထားသည့် ၂၀၂၀ -၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွက် ဌာနဆိုင်ရာအလိုက် တောင်းခံထားသည့်လျာထားချက်ငွေစာရင်း၌ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပြန်ကြားရေးဌာနမှတောင်းခံထား ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ကျောက်တံတားမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာကလည်း” …
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကြက်ဥများအတွင်းမှ ထူးဆန်းတဲ့ အရာများတွေ့ရှိ
[Zawgyi] ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ကြက်ဥများအတွင်းမှ ထူးဆန်းတဲ့ အရာများတွေ့ရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချွှန်ဘူရီ ပြည်နယ်မှာ ကြက်ဥများအတွင်း သန်ကောင်သဏ္ဍာန်အရာတွေ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ ဒါတွေဟာ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ တစ်သျူးများထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်သျူးတွေဟာ သန်ကောင်ပုံစံရှိပေမယ့် သန်ကောင်လို ကပ်ပါးကောင်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချွှန်ဘူရီပြည်နယ်မှာ နေထိုင်သူ Rangsiya Sara-uppatham (၃၄ နှစ်) ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၃၁ ရက်နေ့က အဆိုပါကြက်ဥတွေရဲ့ပုံကို ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်ကာကြက်ဥတွေကို Tesco Lotus စတိုးဆိုင်ကဝယ်ယူခဲ့ပြီး ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အခုလိုမျိုး သန်ကောင်ပုံစံ တစ်သျူးတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်မှာ Tesco Lotus စတိုးဆိုင်နဲ့ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနက အဆိုပါကြက်ဥတွေကို …
ပေ ၁၀၀ ကျော်ရှည်သော ရွှေကျင်သည့်ဖောင်ကြီး ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းမှ မျောပါလာ
[Zawgyi] ပေ ၁၀၀ ကျော်ရှည်သော ရွှေကျင်သည့်ဖောင်ကြီး ဧရာဝတီမြစ် အထက်ပိုင်းမှ မျောပါလာ ပေ ၁၀၀ ကျော် ရှည်သော ရွှေကျင်သည့် ဖောင်ကြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ဗလမင်းထင်တံတားအထက် မိုင်းနားကျွန်းတွင် ဇွန် ၂ ရက်က သောင်တင်လာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယင်း ရွှေကျင်သည့် ဖောင် (ဒေသအ ခေါ်) ရွှေဖောင်ကြီးမှာအလျား ၁၀၅ ပေခန့်၊ အမြင့် ၃၇ ပေခန့်၊ အနံ ၃၁ ပေခန့်ရှိပြီး ပိုင်ရှင်မဲ့ ရွှေဖောင်အပျက် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇွန် ၁ ရက်တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ရေ တိုးလာသဖြင့် မြစ်အထက်ပိုင်းမှ မျောပါလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊မြစ်ကမ်းဘေးသို့ သယ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ …
ရုရှားတွင် ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ ၂၀၀၀၀ ကျော် ယိုဖိ တ်မှုကြောင့် သမ္မတ ပူတင်က အရေးပေါ် အခြေအနေကြေငြာလိုက်ရပြီ
[Zawgyi] ရုရှားတွင် ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ ၂၀၀၀၀ ကျော် ယိုဖိ တ်မှုကြောင့် သမ္မတ ပူတင်က အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေငြာလိုက်ရပြီ ရုရှားသမ္မတပူတင်က အာတိတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းရှိ မြစ်တစ်စင်းအတွင်းသို့ ဒီဇယ်တန် ၂၀၀၀၀ စီးဝင်မှု ဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေညာလိုက်ပီဖြစ်သည်။ ရုရှာနိုင်ငံ ဆိုက်ဘေးရီးယားဒေသ Norilsk မြို့အနီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုရှိ အနီးမှာရှိတဲ့ Thermal Power Plant က ဆီကန် ပေါက်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၉ ရက်က လောင်စာကန် ပြိုကျမှု ဖြစ်ခဲ့၍ အဆိုပါ ဆီယိုဖိတ်မှု ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နှစ်ရက်အကြာမှယင်းကိစ္စကို …
ယခုလ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့ သူကမုန့်ဖိုးသိန်း ၂ဝ ပဲ ပေးလို့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ထီရောင်းသူတစ်ဦး
[Zawgyi] ယခုလ ထီဆုကြီးပေါက်တဲ့ သူကမုန့်ဖိုးသိန်း ၂ဝ ပဲ ပေးလို့ရင်ဖွင့်လာတဲ့ထီရောင်းသူတစ်ဦး ယခု သတင်းကို ( Kaung Lub Moe ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး မနေ့ကအတွေ့အကြုံလေးကြောင့် ခံစားမိတာလေးကို တင်ပြတာပါ။ကျွန်တော်တို့ထီလောကသားတွေရဲ့ အိပ်မက် ဘယ်လိုဆိုတာ ဘော်ဒါတွေအသိဆုံးပါ ကိုယ့်ဆီက ဆုကြီးကံထူးသွားရင် မျှော်လင့်ချက်တွေ တော့ ရှိမှာပေါ့ဗျာ။တစ်ခုပြောရအုံးမယ်ဗျ ကျွန်တော်ရဲ့ထီရောင်းသက်တမ်းက ၂၀၀၄ ခု ကစခဲ့တာဆိုတော့ ခုဖွင့်တဲ့ ပင်ရင်းအချို့တောင် မဖွင့်ရသေးဘူး။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ ခုလက်ရှိ အချိန်ပဲပြောပါ့မယ် ခုအစိုးရလက်ထက်မှာ ဆုစနစ်တွေအရတော့ ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး အကြောင်းကြားရတာ …
BREAKING! ယူနိုက်တက်အသင်းကစားမည့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက် (3) ပွဲအထိနေ့ရက်နှင့်အချိန်သတ်မှတ်မှုရှိခဲ့ပြီ
[Zawgyi] BREAKING! ယူနိုက်တက်အသင်းကစားမည့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်အတွက် (3) ပွဲအထိနေ့ရက်နှင့်အချိန်သတ်မှတ်မှုရှိခဲ့ပြီ စပါး-ယူနိုက်တက် (19) ရက်နေ့ ၊သောကြာနေ့ ည(2:30)၊ယူနိုက်တက်-ရှက်ဖီယူနိုက်တက် (24) ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည (12) နာရီခွဲ၊ဘရိုက်တန်-ယူနိုက်တက် (30)ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့ ည(12)နာရီခွဲ။ ယင်းနေ့ရက်နှင့်အချိန်တို့မှာ TheAthletic သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်ဘက်မှ Offical ကြေညာခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် ယခုဖော်ပြထားသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်တို့မှာ Offical မှအချိန်နှင့်နေ့ရက်တို့ထွက်ရှိလာ ပါကအနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုများရှိနိုင်သေးသည်။ Credit [The Athletic] [Unicode] BREAKING! ယူနိုကျတကျအသငျးကစားမညျ့ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျအတှကျ (3) ပှဲအထိနရေ့ကျနှငျ့အခြိနျသတျမှတျမှုရှိခဲ့ပွီ စပါး-ယူနိုကျတကျ (19) ရကျနေ့ ၊သောကွာနေ့ ည(2:30)၊ယူနိုကျတကျ-ရှကျဖီယူနိုကျတကျ (24) ရကျနေ့ ဗုဒ်ဓဟူးနညေ့ (12) နာရီခှဲ၊ဘရိုကျတနျ-ယူနိုကျတကျ (30)ရကျနေ့၊ အင်ျဂါနေ့ ည(12)နာရီခှဲ။ …
စာသင်ခန်းလား ကလပ်တစ်ခုလား မသဲကွဲတော့တဲ့ (ဗွီယိုဖိုင်) ကဲ မိဘတွေရေ ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို
[Zawgyi] စာသင်ခန်းလား ကလပ်တစ်ခုလား မသဲကွဲတော့တဲ့ (ဗွီယိုဖိုင်) ကဲ မိဘတွေရေ ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို မိဘဖြစ်သူများမှာတော့ သားသမီးလေးတွေ ပညာတတ်တွေဖြစ်အောင်၊ လောကကြီးမှာ ပညာမဲ့ပီး မဆင်းရဲရအောင်ဆိုတဲ့ စေတနာ မေတ္တာတွေနဲ့ ကုန်းရုန်းရှာဖွေပီး ကျောင်းထားပေးကြပါတယ်။ သားသမီးများမှာတော့ ပညာတတ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိ စာသင်ခန်းထဲမှာတောင် အတွဲကိုယ်စီနဲ့ဗျာ။မိသားစုတစ်စုမှသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်အထိ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ ပညာတတ်လိမ္မာရေးကြားရှိမှသာ အဲဒီမိသားစု အဲဒီနိုင်ငံ နောင်တစ်ချိန်မှာ အေးချမ်းသာယာတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလူငယ်တွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ အိမ်ထောင်ဦးစီး နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသူတွေဖြစ်လာကြအုံးမှာပါ။ အဲလို လူငယ်တွေ တောက်ပြောင်အောင် လိမ္မာအောင် ပညာတတ်အောင် သင်ကြားဆုံးမတာဟာ စာသင်ခန်းကလည်း အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှာပါပါတယ်ဗျာ။ဒီလိုအရွယ်လေးတွေမှာ၊ ဒီလိုပညာသင်ကြားချိန်မှာ၊ ဒီလိုစာသင်ခန်းကြီးထဲမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ အတွဲလိုလို ROတာလိုလို ဘာလိုလို ညာလိုလို …
This Year : 250690
Total Users : 545823
Total views : 2419579